Kufika ixesha apho kuya kubakho ukucacisa kumntwana isidingo sokufunda. Ngokwenzululwazi, abazali bazama ukudlulisa ubudlelwane nabazali babo kulwalamano lwabantwana babo.
Baya kuphinda baphinde ngokuphindaphindiweyo lo mzekelo. Kodwa ngakumbi nakakhulu, xa befuna ukulungisa iimpazamo zangaphambili kwindawo entsha.
Ufuna ntoni ebomini? Lo ngumbuzo ongumzali ongunaphakade. Ngamaxesha onke, abazali bakhononda ukuba abantwana babo abafuni ukufunda. Oomama noomama baphinda lo mbuzo ngokunyamezela kwaye abanqweneli ukuqonda ukuba abantwana abafuni ukufunda konke. Italente yabazali ibonakala ngokucacileyo kwimeko yokuba umntwana kufuneka abe nomdla ekufundeni.
Abazali, abakhathazeke ngokungafuni ukufunda abantwana, babandakanyeka kakhulu kwinkqubo yokufundisa umntwana wabo. Singaxelela ukuba abazali banjalo bacinga ukuthatha indawo yomntwana kwideski. Yenza kuye yonke imisebenzi, ulawule uze uyipake ipakethi. Ngaba ngaba abazali "abaphosa" bayeke baye baxelele umntwana isidingo sokufunda?
Wonke umzali uyaqiniseka ukuba imfundo enempumelelo nemfundo ephumeleleyo iya kubonelela ngezingane zabo ikusasa elihle. Abazali, kunjalo, bachanekile. Kodwa kukho ukuphazamiseka kwimali. Uqeqesho olunzulu, ukwesaba ukuba ngumntu olahlekileyo kunye nokugxekwa ngabazali okanye ukufumana "isidima" se "botanist" singenza iminyaka yesikolo ibe kwisihogo sangempela. Akunakwenzeka ukufunda "ngaphantsi kwetonga" imihla ngemihla, kwisimo esicinezelekileyo esisodwa esingenakuthanda ukufunda.
Ekuqaleni, umntwana uza kuzama ukugqiba izifundo zakhe ngokukhawuleza, kwaye bonke ubomi bakhe uya kubazonda ikolo, abazali kunye nootitshala abanyanzelisa ukuba bafunde. Kuvela ukuba umntu unokufikelela kwimiphumo ephikisanayo ngokunyanzela. Abazange baqaphele ukuba abaninzi abantwana abazange bafike kwi piyano emva kokufunda kwisikolo somculo.
Namhlanje, imfundo yanamhlanje iyinkimbinkimbi kwaye inzima. Olu "bunzima" lunokuthi luvezwe ngokuphakamisa iphothifoliyo yomfundi. Yongeza kule nto inqwenelekayo yabazali, izidingo ezigqithisileyo zootitshala, njl. Umntwana ubhekane nomsebenzi ongenakwenzeka - ukufezekisa izicwangciso zabazali bakhe abangazalwanga. Ngelo xesha, abazali abazange bacinge ngethuba elithile ukuba umnqweno wabo unako ukudlula ubuchule babo babantwana. Ngamanye amaxesha abazali bayaxhalaba xa "bevuya" ukubukela umntwana wabo, owaziyo "ukuzikhupha" ekulawuleni kwabazali ixesha elide.
Uninzi lwabazali bayaqiniseka ukuba umntwana wabo uvila kwaye ufuna ukuba baphambuke kwimisebenzi yabo. Kakade, inkolelo enjalo ilungile. Nangona kunjalo, akubona bonke abantwana bacinga ngendlela efanayo, ngokwenene ininzi yabo ilungele ukufunda. Bangakwazi ukwenza zombini ishishini kunye nokuzilibazisa, ukudibanisa ngokuhlakanipha. Abantwana nabo baphupha ngekamva eliyimpumelelo. Bayakwazi ukufundisisa kakuhle kwaye bazibandakanye ngenzondelelo kwishishini. Kwiimeko ezinjalo, umntwana akafanele afunde ukuchaza, kwaye uhlala uvuyiswa kuphela. Sinokuphumeza njani oku?
Okokuqala, abazali ngokwabo mabaqonde ukuba yonke into kwaye ayisoloko ilawulwa kwaye ayikho into ephantsi komgaqo. Ukuba ngaba abazali bayayiqonda ukuba ukunqoba, ukuchithwa okungafaniyo kunye nokutshatyalaliswa kwabantwana akuyiyo kuphela impumelelo yabo kunye neeposiso, kodwa nabantwana. Bayakwazi ukuchaza oku kubantwana babo. Kubalulekile ukunika umntwana inkululeko kunye nokumfundisa ukuzimela. Umntwana uphendula ngokukhawuleza xa unikezwa ukuzimela, xa exakeke kwimeko ehlelwe nguye kunye nemiphumo emihle iya kuxhomekeka kuphela kwindlela anokuhambisa ngayo izenzo kunye nexesha.
Kuvela ukuba abazali abafanele bajongane ngokukhawuleza nombuzo, indlela yokuchazela umntwana umfuno wokufunda? Ngokuqhelekileyo ukukhathazeka okunjalo kumntwana kuvela kumama abangasebenzi kwaye bahlala kuphela neengxaki zomntwana. Ukuba nexesha elininzi lokukhulula, umama uqala "ukunceda" ukufunda umntwana wakhe. Uqeshe iqela labafundisi, ubhala umntwana kuzo zonke iindidi zamacandelo namaqela. Ubomi obunzima obunjalo umntwana uba buthathaka kwaye akanakulingatha, kwaye ngokuphendula, unina uqala ukuqinisa ukulawula. Kunoko, umama kufanele afundise umntwana ngendlela elula yokuzilawula. Ukunyamekela abantwana kunye nabangenakuvimbela kuba ngabazali banquma yonke into kubo kwaye bayenza endaweni yoko. Umgcini wabo ongenaso isithintelo. Ngaphambi kokuba sikolo, abazali abawunikeli umntwana ithuba lokuzivakalisa kwaye benze okuthile ngokwabo, kwaye ngokungena kwesikolo ingxaki ibuhlungu kakhulu.
Izenzo zabo abazali baphinde baxhamle izizathu ezinjengokuthi: "Umntwana akakwazi ukuhlangabezana ngokufanayo! "Abazali abanqweneli ukuphawula ukuba umthombo weengxaki zonke akukho kumntwana, kodwa kuzo. Umntwana wesikolo ukhula, kwaye kunye naye ukulawula kunye nokufunwa kwabadala kuqiniswa. Umntwana uqala ukukholelwa, ngokoyika ukuba kuya kubakho ididi yokuphindezela, uze ujeziswe uze wenze konke. Ngenxa yoko, umntwana uyayeka ukufunda. Umnqweno wabazali kwaye uya kuphazamisa umntwana ukuba afune ukufunda.
Umsebenzi wabazali kukuqonda umntwana kunye nesimo sakhe, kutheni enqabe ukufunda. Beka umntwana kwindawo yomntwana, kwaye ke ucinge ukuba umntu uhlala ebeka iliso kwaye ukhangele ukuba uyadla, uthatha into eyimfuneko, ushiye indlu, uyihlawule iibhilikhwe, uchaze kunye nentombazana, ayizange uyibale loo maxwebhu, njl. .? Konke oku kuya kwenzeka kunye nawe kungekudala, kodwa rhoqo. Ndiyabuza ukuba kuza kuba nini ngaphambi kokuba uqale ukuvukela ukunyamekela okunjalo nokuzonda umphathi? !! Yonke loo mntwana ofanayo uvakalelwa ngabazali. Khawucinge nje ukuba unzima kangakanani umzamo umntwana asebenzisa ekumanyeni, nangona kuninzi kakhulu. Ewe, kuthatha amandla amaninzi kunye namandla kulo. Ngenxa yoko, umntwana uyancipha kwaye ulahlekelwe isisiseko sokufunda.
Yintoni endiyenzayo? Awukwazi ukulawula ngokupheleleyo umntwana? Ukongezelela, ukunikezela inkululeko yomntwana onamhlanje kuyona sinqumo esingenangqondo kunabantwana. Abazali baya kufuna ukukhetha amabakala aphezulu kwisikolo, okanye ukwakheka kuwo umgangatho wokuzimela, ukuzithiba kunye noburhulumente. Abazali bamele bafake kumntwana inkolelo yokunqoba nokuphumelela. Umsebenzi onzima, kodwa akukho bani wathembisa abazali bakhe ubomi obulula nobunzima.
Iphupha lamaphupha kunye neendlobongela ebantwaneni
Indlela elula yokufundisa umntwana wakho indlela yokuthetha kakuhle
Iingxaki zokukhulisa abantwana ngootata-eziqingqiweyo
Indlela yokujongana nabantwana abakhohlisayo abantwana abaseneminyaka elilodwa ubudala
Imbali yekati eneamehlo amaninzi
Ipepper yaseBulgarian ethosiweyo kunye namafutha omnyama kunye neziqholo
Iimveliso zobisi ezomileyo zokutya kwabantwana
I-fishlet fillet kwi-breadcrumbs ne-parmesan ushizi
I-Sorrel: iindlela zokupheka ezona zifanelekileyo nezithombe, ukuvuna ebusika
Yintoni umntu ephuphayo embhedeni?
"Umvuzo wemvundla kaPaster"
Izifo zamalungu amabhinqa angaphakathi
Okokufuna ukwazi umtshakazi malunga nendlela yokuphosa i-bouquet
Ungaziqonda njani umntu ojongene nodlova?
Dessert "Ubuncwane obunxila"
Iingubo zefashini ziphuma entwasahlobo-ehlobo 2016: iintlobo zamanje kunye neemodeli